Qorannoo bultiii 14 keesati godhameen akka biyyati guututti namni qabame parsantiidhan wayta kaahamu 3.8% dha. Woodbury County keessati ammo 3.5% dha.
Gabaasni kan garee non-profit irraa bahe “fayyaa America tiif amanamuma” akka jedhanitti Iowa sababa dhukuba kanaa $million 460 CDC irraa kan fudhate yoo tau, kunis akka biyyati guututi lakkoofsa 23rd irra kan jirtuudha.
Haatau malee, Iowa state turban keessa state tokko kan birrii public health dhaa kennuu diddee,bara 2019 parsantii 3% kan ture wagga darbe ammo 1% dha.
Bakka eegumsa daaimani South Dakota bakka yeroo dingata dhukuba kana baayisuun sodaataman keesa isaan tokko.
Osoo dhukubni kun hin jalqabin dura darbee darbee dhiiban ijoole irra gahu dabaluu waan maluuf yaadessa akka tae himan. Akkasumas, dhimma tokko tokko sababa hin beekamneen himamuu dhabuu akka malu himan.